Slimbook inoshanda pamwe mukugadzirwa kwe laptop ine PowerPC kuvaka | Linux Vakapindwa muropa
Hongu, chokwadi ndechekuti kana Slimbook yawana ... inowanzotipa rimwe basa, nekuti rinoburitsa nhau mumapakeji. Uye ndezvekuti mukuwedzera kune zvigadzirwa zvehardware zvemidziyo yavo, vanoshandawo muchirongwa chinonakidza ku uya nemapurani ePowerPC kumalaptop. Chaizvoizvo! Mhuri imwechete iyo iyo AIM (Apple-IBM-Motorola) yakashandiswa kune pre-x86 Macintosh. Muchokwadi, ini handizive kana iwe uchiziva iyo MKLinux chirongwa umo Apple yakabatana, asi nekuda kwayo iyo Linux kernel yePPC yakaiswa port.
Kuti uite izvi, Slimbook iri kubatana nePower Progress Nharaunda. Sangano rinotsvaga kugadzira kabhuku ine processor yePPC uchishandisa modhi yeyaimbova Philips semiconductor chikamu. Ndiyo NXP T2080. Uye zvinonyanya kufadza kana iwe ukafunga kuti iyo ISA PPC kana Simba ISA yakaburitswa senge yakavhurwa sosi neBM uye yaiisa pasi peLinux Foundation amburera, ichitevera matanho akafanana neRISC-V.
Iyo nharaunda yaita nhamburiko huru yekugadzirisa uye kuumbiridza iyo Linux kernel uye mapakeji anodikanwa anoenderana neiyo Debian chirongwa. Iine NXP PPC machipisi, basa revaItari kubva kuPower Progress Nharaunda uye kubatana pamwe Acube Maitiro ekugadzira iyo mamaboardboard, vane zvinenge zvese. Asi izvo zvinongokupa iwe software chikamu uye zvakawanda zvehardware, asi ivo vanoda chimwe chinhuzve ...
Uye apa ndipo panouya mukana weSlimbook uyo watanga iyi 2019.VaSpanish ndivo vachange vachiona nezvekuvanunura chimwe chinhu chavanoda, mutumbi we laptop. Ndokunge, iyo kesi yese, iyo inotonhora system, skrini, keyboard, backlighting, webcam, maspika, touchpad, bhatiri, inobviswa MXM mifananidzo kadhi, nezvimwe, kutora iyo Slimbook Eclipse semuenzaniso.
Mushure memwedzi yebasa uye kubatana kwepedyo kuchinjana masystem emagetsi nevamwe, zvatove nguva yasvika kugadzira. Uye ndosaka iyo transalpine mubatanidzwa ichikumbira mari ne mhomho yekutsvagisa vanhu. Saka kana iwe uchida kuita yako diki, iwe unogona.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Slimbook inoshanda pamwe mukugadzirwa kwe laptop ine mapurani ePowerPC